I-China S307 isantya esiphezulu semitshini yokuphawula i-vial yomvelisi kunye nomzi mveliso | I-S-conning
ISICELO: Ukukhawuleziswa kweelebheli ezichanekileyo zeebhotile kunye nezinye iibhotile ezincinci ezijikelezayo Iindlela zokondla nkqo kunye nokuthuthwa kwezikhongozeli ezincinci ngesixhobo sokuhambisa kufanelekile kwiibhotile ezingami ngokuqinileyo kwaye ziwe ngokulula.
Inkqubo esebenzayo yokuhambisa isikulufu eqinisekisa ukuba iibhotile zondla uzinzo olongezelelekileyo kunye neelebheli ezichanekileyo eziphezulu kuzo zonke izantya.
• Sebenzisa isixhobo sokwala isilinda somoya, uqinisekise ukuba ungazifumana ngokuchanekileyo kwaye uzikhabe iimveliso ezingafanelekanga xa umatshini usebenza ngesantya esiphezulu
• Ngokukodwa kwimveliso yeLyophilized Powder, umgca wokuvelisa i-pharma kunye nelebhile ye-cryo.
Ilebhiler yeS307 ePhakamileyo enezixhobo ezibalekayo ixhotyiswe ngetekhnoloji yolawulo lwenetcon entsha kwaye ikhawulezayo (ukhetho). Ngokucofa nje isikrini sayo esinye sokuchukumisa, unokuhlengahlengisa ngokulula useto olwahlukeneyo lweemfuno zemveliso yakho.
-Umatshini wethu onabaqhubi be-servo uhambisa iileyibhile ezichanekileyo kunye nesantya esiphezulu. Isilungisi esinamavili esandla esifikeleleka ngokulula kunye nolungelelwaniso lomgaqo kaloliwe osecaleni uvumela "ixesha elongezelelekileyo" kumgca wakho wemveliso! I-S307 isetyenziswa kuwo onke amashishini anje ngamayeza, iimveliso zokhathalelo lomntu, ukutya, iivithamini, izinto zokuthambisa, kunye neekhemikhali, apho ukuthembela okukwinqanaba eliphezulu kungumyalelo wokuvelisa ngokufanelekileyo.
Umatshini uphela ulawulwa yikhompyuter, uzingela ngokuzenzekelayo iibhotile ekujoliswe kuzo nge ileyibheli ngokulandelelana, kunye nezixhobo nazo zinokuxhotyiswa ngomatshini oshushu wokushicilela
Incwadana yokusebenza eyakhelweyo: abaqalayo bangafunda kwisiboniso sendlela yokusebenzisa oomatshini ngexesha elifutshane.
Oku konga imali kunye nexesha ngexesha loqeqesho.
-Yakhelwe kwincwadi yokusombulula iingxaki: umboniso uya kukhokela umsebenzisi ngokusombulula ingxaki.
Ubukhulu (L) 2600 x (W) 1500 x (H) 1800mm
Ubungakanani besikhongozeli Φ13-40mm
Isantya 400 ~ 800bpm
Egqithileyo S308 Isantya esiphezulu somatshini wokulebhelisha ibhotile
Okulandelayo: Umatshini wokuPhawula iPlane
S-322 kabini ivili ngeenxa ibhotile ngeenxa zonke iilebhile m ...
Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Umatshini wokuTywina wePlastiki,